COMMANDS MENU ကိုဝှက်ထားသောအစီအစဉ်များကိုစတင်, WINDOW 7-10 "EXECUTE" - မေးခွန်းနှင့်အဖြေ - 2019
လိုချင်သော menu ကို command ကိုကို Windows 7-10 မှာ "Run ကို" ဘာတွေလဲ? အဘယ်အရာကိုအစီအစဉ်များကို "Run" မှ run ဘယ်သို့ရနိုင်သနည်း
Windows နဲ့ပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးဖြေရှင်းသောအခါ, "Run ကို" (ဒီမီနူးနှင့်ဝသကဲ့သို့, သင်အမြင်ကွယ်ပျောက်လျက်ရှိသောအစီအစဉ်များကို run နိုင်ပါတယ်) ရက်နေ့တွင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အမျိုးမျိုးသော command များကို execute ရန်အလွန်မကြာခဏလိုအပ်ပေသည်။
ပရိုဂရမ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, သို့သော်, စည်းကမ်းအဖြစ်, ကြာကြာဖြစ်ပါသည်, ကို Windows Control Panel ထဲကကနေ run ပေမယ့်နိုင်ပါသည်။ တကယ်တော့က command ကိုရိုက်ထည့်ပါနှင့်ပွင့်လင်း Enter သို့မဟုတ် 10 tabs များနှိပ်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူပါသနည်း
သူတို့ဒီတော့အပေါ်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အမျှ၎င်း၏အကြံပြုချက်များအတွက်, ကျွန်မမကြာခဏ, ဒီသို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုရည်ညွှန်း။ ဤအကြောင်းကြောင့်မကြာခဏ "Run" မှတဆင့် run ဖို့ရှိသည်သူအများဆုံးအသုံးဝင်နှင့်လူကြိုက်များအသင်းများနှင့်အတူငယ်လေးတစ်ထောကျပံ့ဆောင်းပါးဖန်တီးရန်စိတ်ကူး။ ဒါကြောင့် ...
မေးခွန်းတစ်ခုကို№1: ဘယ်လို menu က "Run ကို" ဖွင့်နည်း
မေးခွန်းဒီတော့သက်ဆိုင်ရာမည်မဟုတ်ပါပေမယ့်ကိုယ့်အမှု၌ငါကဒီမှာ add ပါလိမ့်မယ်။
Windows7မှာ ဒီ function ရုံအလုံအလောက် (အောက်ကပုံ) ကဖွင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်း, Start Menu ထဲမှာပေါင်းစပ်ထားသည်။ သင်အလိုရှိရုံ command ကို, သင် string ကို "ရှာရန်အစီအစဉ်များနှင့်ဖိုင်တွေ" ရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်။
Windows7ကို - "Start ကို" မီနူး (နှိပ်) ။
Windows 8, 10 ခလုတ်ပေါင်းစပ်နှိပ်ဖို့လုံလောက်ပါတယ် ဝင်းနှင့် R ကိုထိုအခါသင်သည်များ၏ရှေ့မှောက်၌ပြတင်းပေါက်ပေါ်လာပါကဖြစ်ပြီး, အောက်ပါ command များနှင့်စာနယ်ဇင်း (အောက်တွင်ကြည့်ပါ။ Screenshot) Enter ရိုက်ထည့်ပါ။
ကီးဘုတ်ပေါ်ပေါင်းစပ်ဝင်း + R ကိုသော့
Windows ကို 10 - မီနူး "Run ကို။ "
(အက္ခရာစဉ်အတိုင်း) menu က "execute" ကိုလူကြိုက်များ command များကိုစာရင်းတစ်ခု
1) Internet Explorer ကို
ငါမှတ်ချက်မပါဘဲဤနေရာတွင်စဉ်းစားပါ။ ဒီ command ရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်, သင်က Windows အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဗားရှင်းအတွက်ရရှိနိုင်သည့် web browser ကို, ကို run နိုင်ပါတယ်။ "အဘယ်ကြောင့်ပြေး?" - သင်မေးလိမ့်မည်။ ဒါဟာကအနည်းဆုံးအခြားဘရောက်ဇာကို :) ဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့ပါပဲ။
ဒါဟာ Windows ကိုသို့ built တည်းဖြတ်ဆော့ဖ်ဝဲကို run ကူညီပေးသည်။ ဒါဟာသင်တို့သည်ဤမျှမြန်ဆန်စွာမိမိအပြေးဤနိုငျသောအခါအကြွပ်အယ်ဒီတာတို့တွင်အတွေ့ (ဥပမာ Windows 8 ၌) အမြဲအဆင်ပြေမဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ဦးကအသုံးဝင်စာသားကိုအယ်ဒီတာ။ သင့်ရဲ့ PC မှာ Microsoft Word ကိုရှိသည်မဟုတ်ပါဘူးဆိုရင် - ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦးမရှိမဖြစ်အရာဖြစ်၏။
team: ထိန်းချုပ်မှု admintools
သငျသညျကို Windows တက်ထားသောအခါအသုံးဝင်သော command ကို။
5) Backup ကိုနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး
ဒီ function ကိုနှင့်အတူသငျသညျ backup တစ်ခုမိတ္တူစေ, သို့မဟုတ်ပါကပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ပါ။ ငါ Windows ကို backup လုပ်ထားမိတ္တူစေ, "သံသယဖြစ်ဖွယ်" အစီအစဉ်များကိုအဆိုပါယာဉ်မောင်းကို install မလုပ်ခင်အနည်းဆုံးတစ်ခါတစ်ရံ, အကြံပြုပါသည်။
Windows တွင် notepad ။ တခါတရံမှာ, သင်ကမှတ်စုစာအုပ်အိုင်ကွန်ရှာ, ရိုးရှင်းသောစံ command ကိုအဖြစ်က run ဖို့အများကြီးပိုမြန်စေနိုင်ပါတယ်။
7) Windows Firewall ကို
point ညှိနှိုင်းမှု built-in Firewall ကို Windows တွင်။ သင်ကကို turn off ဒါမှမဟုတ်တချို့ application ကိုမှကွန်ယက်ကို access ကိုပေးဖို့လိုအပျသညျ့အခါဒါဟာတကယ်ကူညီပေးသည်။
သင့်ရဲ့ PC ကိုစသည်တို့ကိုထွက်ဆွဲထားနှေးကွေးစွာလည်ပတ်နေလျှင် - ကအရာအားလုံးကိုကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သောအခါအချိန်ပြန်လှိမ့်ချလိုက်ဖို့ကတန်ဖိုးရှိပါလိမ့်မယ်? (အချို့ယာဉ်မောင်းသို့မဟုတ်အစီအစဉ်များကိုဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်ပေမယ့်။ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ဖိုင်များသည် "site ကို" ပေါ်တွင်တည်နေကြလိမ့်မည်) ကိုပြန်လည်နာလန်ထူဖို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်အများအပြားအမှားတွေကိုပြင်ပေးလို့ရပါတယ်။
စနစ်ကနေစံ output ကို။ (ဥပမာ) Start Menu ကိုချိတ်ဆွဲလာသောအခါ၎င်းသည်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးပေးထားသောကို item (အမျိုးမျိုးသော OS ကို install လုပ်ပါက "သိမ်းသွားလေ၏" ပေါ်တွင်တည်ဆောက်သည့်အခါကဖြစ်ပျက်) မဟုတ်ပါဘူး။
10) နေ့စွဲ & အချိန်
ယင်းအချိန်သို့မဟုတ်ရက်စွဲနှင့်အတူအိုင်ကွန်လျှင်အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်ပျောက်ဆုံးသွားပါလိမ့်မည် - ဒီ command (အပြောင်းအလဲများစီမံခန့်ခွဲသူအခွင့်အရေးများလိုအပ်နိုင်ပါသည်) သင်စနစ်ဗန်းတွင်ဤ icon များရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်ပင်, ရက်စွဲ, အချိန်ကိုမသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ် ... စိုးရိမ်ထိတ်လန်ပါလိမ့်မယ်။
11) disk defragmenter စ
ဤသည်စစ်ဆင်ရေးသင့်ရဲ့ disk ကို subsystem သို့များ၏စွမ်းဆောင်ရည်အရှိန်မြှင့်ရန်ကူညီပေးသည်။ ဒါက FAT file system ကို (- က၎င်း၏မြန်နှုန်းအပေါ်ဤမျှလောက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမပေးကြောင်း NTFS အကွဲကွဲအပြားပြားမှလျော့နည်းကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ပါသည်) နှင့်အတူအထူးသဖြင့်စစ်မှန်တဲ့ drives တွေကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဤနေရာတွင်အသေးစိတ် Defragmentation:
12) ကို Windows Task Manager ကို
(- တစ်စက္ကန့် option ကို :) လည်းမရှိရုံကိစ္စတွင်အတွက်) စကားမစပ်အများဆုံးမကြာခဏ Task Manager ကိုခလုတ်ကို Ctrl + Shift + Esc ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေမန်နေဂျာ (နှင့်အဖွဲ့သူ့ဟာသူ), ဒါကြောင့် Windows တွင်အမျိုးမျိုးသောပြဿနာများမှာအတော်လေးမကြာခဏဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ စကားမစပ်, အဆိုပါ Device Manager control panel ထဲက "တစ်ဥိးက" အချိန်ကြာမြင့်စွာဖြစ်နိုင်ပြီး, မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လျောက်ပတ်ကဒီမှာဒါနိုင်ပါတယ်ဖွင့်လှစ်ရန် ...
14) Windows ကို Down Shut
team: shutdown / s နဲ့
ဒီ command အရှိဆုံးပုံမှန်အတိုင်းကွန်ပျူတာပိတ်အဘို့ဖြစ်၏။ Start မီနူးသင့်ရဲ့ဖိတုံ့ပြန်ပါဘူးဘယ်မှာကိစ္စများတွင်အသုံးဝင်သော။
(add မပါဘဲ။ မှတ်ချက်များ) audio Setup ကို menu က။
16) ဂိမ်း devices များ
သင်ကွန်ပျူတာကို Joystick, စတီယာရင်ဘီးနှင့်ဒါဘွား။ ဂိမ်း devices တွေကိုချိတ်ဆက်တဲ့အခါဒီ tab ကိုအလွန်လိုအပ်ပေသည်။ သင်ဒီမှာဖြစ်ပေါ်စေမည့်မည်ရမည်မဟုတ်သူတို့ကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်လည်းနောက်ထပ်အလုပ်ပြီးမြောက်ရန်မျှော်လင့်ထားကြ၏ရန်။
17), Calculator ကို
ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ဂဏန်းတွက်စက်က start (အထူးသဖြင့် Windows 8 ကိုဒါမှမဟုတ်ဘယ်မှာပြောင်းရွှေ့စံ shortcuts တွေကိုအပေါငျးတို့သရှိသူများသည်အသုံးပြုသူများအတွက်) အချိန်ကုန်သက်သာစေရန်ကူညီပေးသည်။
18) ထို command line က
အများဆုံးအသုံးဝင်ပညတ်တော်တို့ကိုတစ်ခုမှာ! တစ်ဦး disk ကို, OS ကွန်ရက်များတက် setting, Adapter က, etc: အဆိုပါ command line ကိုမကြာခဏအားလုံးပြဿနာများ၏အမြိုးမြိုးဖြေရှင်းဘို့လိုအပ်
တစ်ဦးကအလွန်အရေးကြီးသော tab ကို! ဒါဟာ Windows ကို၏ startup စိတ်ကြိုက်ကူညီပေးသည်, ပစ်လွှတ်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပြီး program ကို run မထားသင့်သောအရာကိုညွှန်ပြ။ ယေဘုယျအားဖြင့်အသေးစိတ် operating system ကို settings အတွက် tabs များထဲကတစ်ခု။
Windows တွင် 20) အရင်းအမြစ်စောင့်ကြည့်
team: perfmon / res
ဒါဟာစွမ်းဆောင်ရည်ပိတ်ဆို့မှုများရှာဖွေရေးမှာများနှင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့အသုံးပြု: စတာတွေက Hard disk ကို, ဗဟိုကွန်ယက်ကို Processor, သင့်ရဲ့ PC မှာနှေးကွေးသည့်အခါအားလုံးအားလုံး - ငါကဒီမှာကြည့်အကြံပြု ...
အချို့ကိစ္စများတွင်, သင်ရှိရာအများပြည်သူဖိုလ်ဒါကိုရှာဖွေပါကဤနည်းအားလျောက်ပတ်တဦးတည်း command ကိုရိုက်ထည့်သူတို့ကိုကြည့်ရှုပိုမိုလွယ်ကူသည်။
ပုံမှန်အား "junk" ဖိုင်တွေကနေ disc ကိုသန့်ရှင်းရေး, သင်ကပေါ်နေရာလွတ်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်မသာပေမယ့်အနည်းငယ်ယေဘုယျအားဖြင့်အားလုံး PC များ၏စွမ်းဆောင်မှုအရှိန်မြှင့်ရန်။ သို့သော် built-in သန့်စင်နိုင်အောင်ကျွမ်းကျင်ဘဲ, ဒါကြောင့်ငါကဤအကြံပြု:
23) Control Panel ကို
ဒါဟာစံ Windows ကို Control Panel ထဲကဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်ကူညီလိမ့်မယ်။ စတင် menu ကိုဖမ်းလိုလျှင် (ဤစပယ်ယာ / ရှာဖွေသူနှင့်အတူပြဿနာများ၏အမှု၌ဖြစ်ပျက်) - ယေဘုယျအားဖြင့်မရှိမဖြစ်အရာကား!
24) Folder ကို "ဒေါင်းလုဒ်များ"
ဒေါင်းလုပ်ဖိုင်တွဲဖွင့်ဖို့ prompt ကိုဆင့်ဆိုလော့။ ကို default ခုနှစ်တွင်ကို Windows folder ကို (Windows ကိုဖွင့်ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ဆီးတားလေပြီပါဘူးဘယ်မှာ ... မကြာခဏများစွာသောအသုံးပြုသူများအတွက်ရှာကြသည်,) ဖိုင်တွေအားလုံးကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ပွင့်လင်းဖိုလ်ဒါ, display နှင့်ဒါပေါ်မှာ။ ခဏချိန်ညှိခြင်း။ အလွန်နေရာလေးကိုသင်ကလျင်မြန်စွာ directory များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ကို set up ဖို့လိုအပ်သည့်အခါ။
command: shutdown / r ကို
ကွန်ပျူတာ reboots လုပ်သွား။ သတိပေးခြင်း! ကွန်ပျူတာဖွင့်လှစ်ပလီကေးရှင်းအမျိုးမျိုးကိုအချက်အလက်များ၏ဇွဲမှာဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမရှိဘဲချက်ချင်းပြန်လည်စတင်လိမ့်မည်။ ဒါဟာ "ပုံမှန်" နည်းလမ်း PC ကို restart ပြန်လုပ်ဖို့မကူညီဘူးသည့်အခါဒီ command ရိုက်ထည့်ရန်အကြံပြုသည်။
team: ထိန်းချုပ်မှု schedtasks
အလွန်ကောင်းသောအရာကိုသင်တချို့ပရိုဂရမ်ကို run ရန်အချိန်ဇယားကို set up ချင်သည့်အခါ။ ဥပမာအားဖြင့်, သစ်ကို Windows တွင်နောက် startup အချို့ program ကိုထည့်သွင်းဖို့ - တစ် Scheduler မှတဆင့်ထိုသို့ပြုမှပိုမိုလွယ်ကူ (ကိုလည်း PC မှာလှည့်အပြီး, တစ်ဦးအထူးသဖြင့် program ကို run ဖို့မည်မျှမိနစ် / စက္ကန့်ညွှန်ပြ) ။
28) Disk ကို Check
mega ကောင်းသောအရာ! သင့်ရဲ့ hard disk ကိုပျက်ကွက်ပါက Windows ကိုမမွငျနိုငျသညျ,, Window တစ်ခုကို format မှပွင့်လင်းလိုလားပါဘူး - ဆောတလျင်မပါဘူး။ ပထမဦးစွာအမှားအယွင်းများထိုသို့စစ်ဆေးကြိုးစားပါ။ အလွန်မကြာခဏ, ဒီ command ကိုရိုးရှင်းစွာဒေတာကယ်တင်တော်မူ၏။ အဲဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုဤဆောင်းပါး၌တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်:
သင့်ကွန်ပျူတာဖွင့်တဲ့အခါမှာသင်မြင်သောသူအပေါင်းတို့: desktop ပေါ်မှာ, taskbar, etc - သင် (ရှာဖွေသူဖြစ်စဉ်ကို) ကပိတ်လိုက်လျှင်ကစပယ်ယာကိုပြသထားတယ်, ဒါကြောင့်သာအနက်ရောင်မျက်နှာပြင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ တစ်ခါတစ်ရံစားရှာဖွေသူဆွဲထားတဲ့နှင့်ပြန်လည်စတင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်, ဒီ command ငါမှတ်မိဖို့ကအကြံပြုမယ်လို့အတော်လေးရေပန်းစားသည် ...
ဒီ tab ကသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် install လုပ်ပြီးသော applications များနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ မလိုအပ်ပါဘူး - ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ စကားမစပ်, applications များစာရင်းကိုဒါ on installation ကိုရက်စွဲ, ခေါင်းစဉ်ကခွဲထားခဲ့သည်နိုင်ပါသည်။
Tab ကိုအဓိကအကြား, မျက်နှာပြင်အပြင်အဆင်များနှင့်အတူဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ် - မျက်နှာပြင် resolution ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် control panel ထဲကအချိန်ကြာမြင့်စွာကြည့်ဖို့ - ( အကယ်. သင်သိလျှင်သင်တန်း၏,) ဒီ command ကိုရိုက်ထည့်ဖို့အများကြီးပိုမြန်။
32) ဒေသခံ Group Policy Editor ကို
တစ်ဦးကအလွန်အသုံးဝင် command ကို။ အဆိုပါဒေသခံ Group Policy Editor ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်, သင်အမြင်ကနေဝှက်ထားလျက်ရှိသောအများအပြား setting များကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ မိမိအဆောင်းပါးတွေမှာကျွန်မမကြာခဏသူ့ကိုရည်ညွှန်း ...
33) Registry Editor ကို
team: regedit လို့
နောက်ထပ်အကြီးစားအသုံးဝင်သော command ကို။ အဲဒါကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်, သင်အလျင်အမြန် registry ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ပါ။ ။ registry ကိုရန် "ကိုတက်ကြဘူး" ဟုရှိခြင်းမရှိဘဲ, ကအလုပ်မလုပ်ပါဘူး - registry ကိုအလွန်မကြာခဏယေဘုယျခုနှစ်, operating system ကိုပြဿနာအမျိုးမျိုးအတွက်စသည်တို့ကိုရှေးအမြီးကိုဖျက်သည်မမှန်ကန်ကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုတည်းဖြတ်ရန်ရှိသည်ဖြစ်ပါတယ်။
34) System ကိုပြန်ကြားရေး
BIOS ကိုဗားရှင်း Motherboard ကမော်ဒယ် operating system ကိုဗားရှင်း၎င်း၏စွမ်းရည်, etc: သင့်ကွန်ပျူတာကိုအရာအားလုံးအကြောင်းကိုပြောပြလိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးကအလွန်အသုံးဝင် utility ကို အချက်အလက်များ၏တစ်ဦးကအများကြီး, အံ့ဩစရာမရှိသူတို့က built-in utility ကိုဒီအမျိုးအစားပင်အချို့ Third-party အစီအစဉ်များကိုအစားထိုးနိုင်မပြောကြပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, (Third-party software ကို install လုပ်ဖို့အတူတူပင်ဖြစ်နှင့်တစ်ခါတစ်ရံထိုသို့ပြုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးမည်မဟုတ်) မဖြစ်သင့် PC ကိုထံသို့ ဝင်. စိတ်ကူး - ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ပွေးသမျှသောလိုအပ်ကွညျ့ပိတ်ထား ...
စသည်တို့ကို, ဒီ Command ဖြင့်, သင်ကွန်ပျူတာအလုပ်လုပ်အုပ်စုကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်ကို PC များ၏အမည်, Device Manager စတင်စွမ်းဆောင်ရည် configure, user profiles များအားလုံး
36) အင်တာနက်ကို Properties ကို
အသေးစိတ်က Internet Explorer ၏အပြင်အဆင်များအဖြစ်ယေဘုယျအားဖြင့်အင်တာနက်ကို (စသည်တို့ကိုဥပမာ, လုံခြုံရေး, privacy ကို,) ။
37) Features: Keyboard ကို
သင့်ရဲ့ကီးဘုတ်တက်သတ်မှတ်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင် cursor ကိုမကြာခဏ (ခဲ) ရောက်ကြပါ၏စေနိုင်သည်။
38) ကြွက် Properties ကို
team: ထိန်းချုပ်မှု mouse ကို
mouse ကိုစစ်ဆင်ရေးများအတွက်အသေးစိတ်ပြင်ဆင်ချက်များ, ဥပမာ, သင် mouse ကိုဘီး၏စာစောင်ကိုမြန်နှုန်းပြောင်းလဲနိုင်သည်, စတာတွေကို double ကလစ်၏အမြန်နှုန်းညွှန်ပြမှလက်ျာဘက်လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်, ပြောင်းပြန်
39) Network ကို Connections ကို
အဆိုပါ tab ကိုဖွင့်လှစ်:Control Panel ကို ကွန်ယက်နှင့်အင်တာနက် ကွန်ယက် Connections ကို။ အင်တာနက်နှင့်အတူပြဿနာများ, ကွန်ယက်ကို Adapter က, ကွန်ယက်ကိုယာဉ်မောင်း, etc ၏အမှု၌ကွန်ယက်အပြင်အဆင်များမှာအလွန်တပ်မက်လိုချင်သောအ tab ကို ယေဘုယျအားဖြင့်အသင်းအစားထိုးလို့မရတဲ့ပါ!
တစ်ဦးကအလွန်အသုံးဝင် tab ကို! ဒါဟာသင်န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုစိတ်ကြိုက်ရန်ခွင့်ပြုသည်:, သူတို့ရဲ့ startup type ကိုပြောင်းလဲပစ် enable, disable, etc ဒါဟာသင်ကိုမိမိတို့အဘို့ကို Windows-ညှိဒဏျကွေးဖို့ခွင့်ပြု, အရှင်သင်၏ကွန်ပျူတာ (လက်ပ်တော့ပ်) ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။
41) Diagnostic Tool ကို DirectX ကို
အလွန့်အလွန်အသုံးဝင်သော command ကို: သင်သည် CPU ကိုမော်ဒယ်ကဗီဒီယိုကဒ်, DirectX ကိုဗားရှင်းမျက်နှာပြင်ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိများကိုကြည့်, မျက်နှာပြင် resolution ကိုများနှင့်အခြားဝိသေသလက္ခဏာများကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည် ..
42) Disk ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု
နောက်ထပ်အလွန်အသုံးဝင်အရာ။ ဘယ်နေရာမှာမဆိုဒီအသင်းမပါဘဲ - သင်တစ်ဦးကို PC ဖို့အားလုံးကိုချိတ်ဆက်မီဒီယာကိုတွေ့မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်။ ဒါဟာစတာတွေ, အပိုင်းသို့သူတို့ကိုငါကိုချိုးဖျက်, format နဲ့ drives တွေကိုကူညီပေးသည်, partition ကိုအရွယ်အစားပြောင်းလဲပြောင်းလဲမှု drive ကိုအက္ခရာများ
43) Computer ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု
setting များကိုတစ်ကြီးမားအမျိုးမျိုး: disk ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု, Scheduler, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် applications များ, etc မူအရ, သင်သည်ဤ command ကို (ဒီဆောင်းပါးအတွက်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောရှိသူများအပါအဝင်) အခြားသူတွေများစွာကိုအစားထိုးပါလိမ့်မယ်မှတ်မိနိုင်ပါတယ်။
ဒီ tab ကိုသင်တို့အဘို့မရှိမဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု - သငျပရင်တာသို့စကင်နာရှိပါက။ အဆိုပါကိရိယာနှင့်အတူမည်သည့်ပြဿနာဆိုပါက - ငါကဒီ tab ကိုနှင့်အတူစတင်အကြံပြုပါသည်။
45) User Accounts များကို
ဒီ tab မှာ, သင်အသုံးပြုသူများ add တည်ဆဲအကောင့်တည်းဖြတ်နိုင်သည်။ သငျသညျကို Windows startup မှာ password ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုတဲ့အခါဒါဟာအစအသုံးဝင်ပါတယ်။ ယေဘုယျခုနှစ်, tab ကိုအလွန်အချို့ကိစ္စများတွင်လိုအပ်နေပါသည်။
46) on-screen Keyboard ကို
သငျသညျကီးဘုတ်ပေါ်မဆို key ကိုအလုပ်မလုပ်ဘူးလျှင်နေရာလေးကိုအရာ, (သို့မဟုတ်သင်, spyware အမျိုးမျိုးကနေရိုက်ထည့်လျက်ရှိသောသူတို့ကိုသော့ဖုံးကွယ်ချင်) ။
, (အဓိကနဲ့ဘက်ထရီ) ကို turn off မျက်နှာပြင်၏အရောင်အဝါ ထား. စစ်ဆင်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်, etc: ပါဝါထောက်ပံ့ရေး configure အသုံးပြုသည် ယေဘုယျအားထုတ်ကုန်၏နံပါတ်၏တန်ခိုးထောက်ပံ့ရေးစစ်ဆင်ရေးကနေလွတ်လပ်သော။
(- ကြိုတင်မဲအတွက်ကျေးဇူးတင်စကားအဆိုပါဖြည့်စွက်နှင့်အတူ) ... ဆက်လက်ခံရဖို့။
ဗီဒီယို Watch: ပဂ ရစညခစတတ က ဖမခတ မမငမရ န Run & Gun (အောက်တိုဘာလ 2019).